HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 15-JUNE-2020
Monday June 15, 2020 - 10:57:27 in Wararka by Mogadishu Times
MAXAA KA SOO BAXAY SHIRKII MADAXDA SOOMAALIYA IYO SOMALILAND EE JABUUTI? Madaxda Soomaaliya, Somaliland, Jabu uti iyo Itoobiya oo Shalay ku kulmay M/Jabuuti M/Jabuuti ee caa simadda Jabuuti waxaa Shalay lagu soo gaba-gabe eyay shir Shalay ku d
MAXAA KA SOO BAXAY SHIRKII MADAXDA SOOMAALIYA IYO SOMALILAND EE JABUUTI? Madaxda Soomaaliya, Somaliland, Jabu uti iyo Itoobiya oo Shalay ku kulmay M/Jabuuti M/Jabuuti ee caa simadda Jabuuti waxaa Shalay lagu soo gaba-gabe eyay shir Shalay ku dhex maray madaxda DFS & ku wa Jamhuuriyadda goonni is u taag eeda ku dhawaaqday ee Somaliland. Shirkan oo ay marti gelinaysay D/ Jabuuti ayaa waxaa ergada 2da dhinac kala hogg aaminayay madaxweynaha Soomaaliya Ma xamed C/hi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cadi. War-murtiyeed laga soo saaray shirkaasi ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyay in la sa meeyo guddi farsamo oo wada jir ah, kuwa as oo hawsha halkaa ka sii wadi doona isla markaana dib u eegi doona waxyaabaha ho rey loogu heshiiyay, in 2da dhinac aanay siy aasadeyn kaalmooyinka horumarineed iyo maalgashiga iyo in dalka Jabuuti uu noqdo madasha kulammada dhanka farsamada ee lagu sii dhaqaajinayo wada-hadallada. Hasayeeshee Agaasimaha Warfaafinta ee Madaxtooyada Soomaaliya, Cabdinuur Maxamed Axmed, oo farriin soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayaa sheegay in war-mutiyeedka lagu faafiyay baraha bulshada uusan ahayn midkii rasmi-ga ahaa.
Halkan hoose ka akhri farriinta Cabdinuur Maxamed.
Farriin uu bartiisa Facebook-ga soo dhig ay Agaasimaha Warfaafinta ee Madaxtooy ada Somaliya, Cabdinuur Maxamed Axmed
Furitaankii kulankaasi waxaa khudbado ka jeediyay madaxda loo garqaadayo ee dhina ca Soomaaliya uu hogaamiyo Madaxweyne Maxamed C/hi Farmaayo iyo dhinaca uu hor kacayo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Madaxweynaha Somaliland Muu se Biixi Cabdi Madaxaweynaha
Somaliland oo madasha kaje ediyay khudb ad kooban ay aa carrabka ku adkeeyay ha lka ay markii horaba ka halo wday arrinta Somaliya & Somaliland,wuxuu she eg ay in dib u billaabida wad a-xaajoodyadan oo tagee ro ka helayo beesha caal amka ay yihiin kuwo aad muhiim ugu ah sidii loo abuuri lah aa xiriir nabdon oo caga buu xa ku taagan oo u dhaxeya shacabka Soma liland & Somaliya"J/Somaliland,waxay xorriy addeeda ka heshay dowladda boqortooya da Ingiriiska 26-kii Juun saandkii 1960. Xorri yad daasi ayaa laga diiwaangeli yay Q/Mido obey, waxana Somalila nd aqoonsaday 35 wadd an.Somaliland ayaa si is keed ah Soomaaliya ula Midowday 1-dii Luuliyo 1960, si loo yagleeyo J/S oommaaliya.Midowgaasi ma ahan mid sharc iyan wax ku ool ah maadaama heshiiskaasi midnimada aan si rasmi ah loo wada saxii xin. Sidaa awgeed,dedaalladaasi midnima da ayaa ka hooseeyay heerka caalamiga ah iyo kan maxalliga ahba," ayuu yiri Muse Bixi.
Waxa uu sheegay in 30-kii sano ee la soo dhaafay, Soomaaliya ay dagaal joogta ah ku la jirtay horumarka Somaliland, dhaqaale ah aan, amni ahaan iyo maalgashiba, arrintaa oo uu sheegay inay sii fogeysay kala shak iga iyo cadaawada u dhaxeysay 2da dhinac.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/hi Farmaajo
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed C/hi Farmaajo,ayaa dhan kiisa sheegay inay ka go'an tahay sii wadista wadahallada iyo isu soo dhaweynta 2da dhinac. "Aniga iyo walaalkey Muse Biixi waxaan halk an u joognaa ina an gaar no go'a anno adag si dad kayaga ay u hela an mustaqbal wa naagsan." ayuu yiri Farmaajo
Dhanka kale, waxaa kulanka goobjoog ka ahaa madaxweynaha martida loo yahay ee Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle iyo R/ Wasa araha Itoobbiya Abiy Ahmed.
Abiy oo sanadkii la soo dhaafay ku guule ystay abaalmarinta nabadda ee Nobel ayaa sheegay in waxa Shalay shirka wada fadh iya ay yihiin dad isku qoys ah oo haddana deris wada ah.
"Kani waa shir ay isugu yimaadeen xub no ka wada tirsan hal qoys.Waligey waxaan sheegayay in waddamadeenu ay isku xirto hal xuddun.Waxaanu na hay walaalo wada dhash ay,waana ku khasbann ahay inaan taa ku faan no. Walaalayaal, geeska Afrika waxa uu soo maray muddo dheer oo ay ka jirtay dowlad xumo iyo hoggaan guuldareystay.
Waxaan la qabsannay burburka, qaraxya da iyo muddo tobaneeyo sano ah oo dhaqaa le xumo ah, kuwaa oo ka dhashay colaad ca qli xumo ah. Waa inaan arrintaasi wax ka ba dalnaa oo aan billownaa bog cusub," ayuu yiri Abiy Axmed.
Madaxda Soomaaliya, Somaliland, Jabuu ti iyo Itoobiya oo Shalay ku kulmay magaalada Jabuuti
Waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay dhibaato badan soo mareen balse ay yi hiin dad gagsi badan isla ma rkaana maskax furan oo ganacsiga aad ugu xeel dheer, wa xa uuna intaasi ku daray in shacab ka Somaliyeday haatan sugayaan.
Madaxtooyada Villa Somalia oo Axmed Madoobe u aqoonsatay Madaxweyne KMG ah
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa soo saa rtay war saxaafadeed ku saa bsan mowqifkeeda ku saab san doorashooyinkii dowlad goboleedka Jubbaland.
War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Axmed Madoobe yahay Madaxweynaya Jub baland ee Kumeel gaarka ah, taasoo muddo xileedkiisa uu ka bilaabanayo markii u waq tigiisu dhamaaday.
Mawqifka Dfs Ee Ku Saabsan Door Ashooyinkii Dowlad Goboleedka Jubaland
DFS iyada oo ka duuleysa qaraarkii Gol aha Wasiirada XFS ay ku ansixiyeen go’aan kii W/Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta kaasoo ay ku caddaysay ina ysan aqoonsaneyn natiijooyinkii kasoo bax ay doorashooyinkii Jubaland ee hareer mar sanaa habraacyada saxda ah ee ay dejisay Wasaaradda, kana hor imaanayay Dastuur ka Jubaland iyo Dastuurka Federaalka;
DFS iyada oo tixgelisay mawqifkii caddaa ee Beesha Caalamka ee ku aaddanaa in ay lagama maarmaan tahay inay dhacdo doora sho la isku raacsanyahay, la isku halleyn ka ro, haysata taageerada dadka Jubalanad oo dhan, horseedi karta midnimada bulshada Jubaland, laguna duray sax ahaanshaha doorashadii dhacday;
DFS waxay ka xun tahay faragelinta qaa wan ee Kenya ee arrimaha doorashooyinka Jubaland taasoo dooneyso in ay cadaadis si yaasadeed uga dhigto DFS si ay danaheeda uga gaarto qadiyadaha lagu muransan yah ay ee dhex yaalla 2da wadan gaar ahan dac wada bada ee u dhaxaysa Somaliya&Kenya
DFS oo garawsan baahida loo qabo in la helo maamul ay heshiis ku yihiin dhammaan dadka deegaanka, ayna lagama maarmaan tahay in la lasoo afjaro khilaafaadka soo jii tamayay waxay soo saartay go’aamadan;
1.DFS waxay Md. Axmed Maxamed Islaam u aqoonsanaysaa Madaweynaha Maamulka KMGah ee Jubaland.
2. Muddo-xileedka Maamulkan KMG ah waa 2sano ah oo ka bilaabanaysa xilligii uu dhammaaday muddo xileedkii u dambeeyay.
3. Waxaan ugu baaqaynaa Madaxweyna ha KMG ee Jubaland inuu fidiyo gogol ay is ugu imanayaan dhammaan dadkii ku kala ir dhoobay khilaafka ka dhashay doorashadii Jubaland si dib loogu yagleelo Jubaland mid eysan, ayna ka dhacdo doorasho waafaqsan Dasturka Jubaland iyo Dasturka Federalka.
4. DFS iyada oo gudanaysa waajibeedke eda dastuuriga ah waxay mar walba u tag an tahay ilaalinta danadaha qaranka, mind imada shacabkeeda iyo wadajirka dhuleed iyo badeed ee JF/Soomaaliya.
Akhriso: Jubbaland oo qaadacday aqoon sigii Madaxtooyada Soomaaliya
Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa qaa dacday war saxaafadeedkii ka soo baxay Madaxtooyada Soomaaliya ee ahaa in Ax med Madoobe u aqoonsatay Madaxweyne KMG ah iyo labo sano oo muddo xileedkiisa yahay, kaasoo ka bilaabanaya maalintii la doortay.
War saxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu caddeeyay in aanay jirin cid go’aan ka gaari karta muddo xileedka iyo doorashooyinka Jubbaland, si aan waafaqsaneyn Dastuurka, isla markaana muddo xileedka hey’adaha loo doorto inay yihiin 4 sano.
QM, IGAD iyo Amisom oo ka wada-hadlay xaalka Somalia
Shir 3 geesood ah oo u dhexeeyey Q/Mi doobay, IGAD iyo AMISOM ayaa ka dhacay M/Muqdisho, kaas oo looga hadlay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan wada shaqeynta u dhexeysa saddexdaasi dhinac.
Kulanka oo ku qabsoomay Video Confer ence ayaa waxaa diirada lagu saaray howla ha xafiisyada UNSOM, IGAD iyo AMISOM.
Sidoo kale waxaa lagu soo qaaday geed di socodka iyo xoojinta isk aashiga kala dhax eeya So omaaliya. War kooban oo ka soo ba xay xafiiska wakiilka QM, James Swan ayaa lagu faah faahiyey kulankaasi , iyadoona la gu sheegay in dhammaan xubnahaan ay isla meel dhigeen waxyaabihii ay ka wada hadl een.
"Waxa aan ku faraxsanahay in maalmihii la soo dhaafay aan saxii xnay Heshiis Isfah am oo u dhexeeya AMISOM, IGAD iyo UNS OM, oo aan ku xoojineyno iskaashigeenna iyo iskaashigeenna aan hore ugu taageer nay Hay’adaha iyo dadka Soomaaliyeed.” Ay aa lagu yiri qoraalka.
Shirkan 3 geesoodka ah ayaa ku soo aad aya, xilli dalka uu ku jiro marxalad kala guur ah, dowladduna ay um diyaar garoobeyso doorasho dhacda 2020/2021-ka.
Mareykanka oo War kasoo saaray Shir ka Shalay ee Somalia iyo Somaliland
Safaaradda Mareykanka ee M/Muqdisho ayaa War kasoo saartay Shirka Shalay ka furmaya M/Jabuuti ee Caasimadda dalkaas ee u dhexeeya Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/hi Farmaajo iyo Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Qoraal kasoo baxay Safaa radda Mareykanka ee Mu qdisho ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay wada-ha dalka u furmaya Somalia iyo Somaliland, kaasi oo uu shir Guddoomin doono Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Sidoo kale Qoraalka ayaa waxaa lagu bo gaadiyay Madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi, isla markaana Mareykanka uu mahad celiyay Madaxweyne Geelle oo marti geliyay kulan taariikhi ah.
"Safaarada Mareykanka ee Muqdisho ay aa waxaa ay soo dhaweyneysaa furitaanka wadahadalka Somalia iyo Somaliland oo Shalay ka dhacaya Djibouti. Waxaan ama aneynaa hoggaanka Madaxweyne Maxa med C/hi Farmaajo iyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Waxaa mahad leh Madaxweyne Ismael Cumar Geelle oo marti geliyay kulan taariikhi ah.” ayaa lagu yiri Qoraalka Safa aradda Mareykanka.
Ugu dambeyn Qoraalka ayaa waxaa lagu cadeeyay in Mareykanka uu taageerayo iskaashiga wanaagsan ee dhexmara dadka Soomaaliyeed, waxaana dhammaan dadka Soomaaliyeed loogu baaqay inay qayb ka noqdaan wada-hadalka labada dhinac.
Madaxweyne Farmaajo oo soo saaray casuumaad rasmi ah u diray Maamul Goboleedyada
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa casuumaad rasmi ah oo ku saabsan Shirka Golaha Amniga Qar anka u fidinaya Madaxweyneyaasha D/obol eed yada iyo Guddoomiyaha Maamulka Gob olka Banaadir.
Shirkan ayaa ku saabsan sidii wadatashi yo ballaaran looga yeelan lahaa geeddi soc odka doorashooyinka dalka, arrimaha amni ga, dagaalka ka dhanka ah koo xa ha argixisa da, dhammeystir ka dib u eegista dasturka iyo horumarinta dhaqaalaha dal ka.
Sidoo kale, waxaa jira shir hordhac ah oo ku qabsoomaya aaladda la iska arki karo kaasoo lagu qiimeynayo dadaallada wadajir ka ah ee haatan socda ee lagula dagaallam ayo cudurka Coronovirus, sidii loo sii xoojin lahaa ka hortaggiisa iyo culeyska dhaqaale ee ka dhashay .
Jadwalka uu ku qabsoomayo Shirka Amn iga Qaranka waxaa ka shaqeynaya guddiyo farsamo oo ka kooban dhammaan dhinacya da kasoo qeybgalaya si loo sii amba qaado wadatashiyada arrimaha masiiriga ah ee dal ka iyo xoojinta wada shaqeynta DF iyo Dow ladaha Xubnaha ka ah.
Madaxtooyada JFS waxa ay adkaynaysaa muhiimadda shirkan, maadaama uu dham meystir u yahay guulaha siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee ay wadajirka u xaqiijiyeen shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed, wa xa uuna shirku jihaynayaa hannaanka dimu qraadiyeed ee dalkeenna.
Al-shabaab oo soo bandhigay askar ay sheegeen in ay kasoo goosteen Jubbaland
War lagu daabacay baraha taageera Al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in ci idamo kasoo goostay dhinaca Jubbaland ay iska soo dhiibeen Degmada Jilib ee G/ Jubb ada dhexe ee K/ Som liya.
Sawirka 2daan askari ayaa lasoo bandh igay, waxayna Al-shaba ab sheegeen inay ka ka la tirsanaayeen Ciidama da nabad sugidda Jubal and iyo guutada 43-aad ee Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.
Askartaan la sheegay in dhanka Jubbala nd kasoo goosteen ayaa waxaa magacyado oda lagu kala sheegay Xasan Cabdi Ibraa him oo ka tirsanaa militariga dalka iyo Deeq Xasan Cabdi oo isagana ka mid ahaa ciida mada nabad-sugidda maamulka Jubaland.
Ma jiraan illaa iyo hadda war kasoo baxay militariga Soomaaliya iyo nabad sugidda Ju bbaland , kaas oo ay uga jawaabayaan aska rtaan la sheegay in ay ka goosteen oo Al-shabaab isku dhiibay.
laftagareen oo Saraakiisha Ciidamada G/Bakool kala hadlay dagaalka Al-Shabaab
Madaxweynaha D/G/K/Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftagareen) oo weli ku sugan degmada Xudur ee Xarunta G/Bak ool ayaa waxaa uu la kulmay Saraakiisha Cidiamada Dowladda ee ku sugan gobol kaas.
Kulanka oo ka dhacay degmada Xudur ay aa madaxweyne laftagareen waxaa Saraa kiisha Guuta da 9aad qeybta 60a ad CXD kala hadlay gelinta Xureynta Guud ahaan G/Bakool oo meelo kamid ah ay jooga an Al-Shabaab.
Madaxweynaha D/G/ K/Galbeed Md. Lafta gareen ayaa waxaa uu sheegay in Saraaki isha Ciidamada Dowladda & kuwa Koonfur Galbeed looga baahan yahay inay bilaabaan howlgal ka dhan ah Al-Shabaab.
Degaano hoostaga degmada degmada Xudur ee Xarunta G/Bakool ayaa waxaa weli ku sugan Xubno ka tirsan Ururka Al-Shab aab,waxaana maalma ka hor ay dagaal cul us Ciidamada Dowladda kula galeen degaan ka Abal ee duleedka degmada Xudur.
Puntland: Ilmo shan sano jir ah oo laga helay cudurka Covid 19
Dowlad goboleedka Puntland ayaa sha aciyay 14 qof oo laga helay cudurka Covi d19 in uu kamid noqday ilmo yar oo shan sano jir ah oo jirkiisa laga helay cudurka Covid19, sida lagu ogaaday baaritaanka laga qaaday.
Waa markii ugu horeysay oo ilmo da’daas jira laga helo cudurka guud ahaan Soomaa liya, arintaas oo ay Puntland u aragtay in cu durka saameeyay carruurta.
12 kamid ah dadka cudurka laga helay waxay ku sugan yihiin M/Garowe G/Nugaal, 2 kalena waxay joogaan M/Qardho ee G/Kar kaar.
Tirada guud ee dadka xanuunka laga hel ay Puntland ayaa hada gaartay 235 qof, wax aa u dhintay 7 qof halka bogsashasa la dii wan geliyey ay tahay 41 qof.
Puntland ayaa gashay xaalad feejigaan caafimaad oo dheeri ah kadib markii cudur ka faafitaankiisu soo labo kacleeyay.
Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa dib u dhigay shirarka ururada siyaasadeed yada Puntland ay bishaan qabsan lahaaye en, waxaana dib loo dhigay muddo bil ah.
Somaliland oo xaqiijisay in uu fashilm ay Shirkii Jabuuti ee Soomaaliya iyo Somaliland
Gudoomiyaha Golaha guurtida ee Som aliland Saleebaan Maxamud Aaden ayaa sheegay inay hadda ku kala kaceen wafd iga D/F shirka uga socda Jabuuti, wuxuu sheegay in qodobada Ajendaha iyo fulinta heshiisyadii hore ay dhinacyadu isku qab teen.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in aysan jiri doonin wax wadahad al ah oo 2da dhinac dhexmari doona, maadaama Madaxwe yne Farmaajo uusan fulin qodobadii lagu horay loogu heshiiyay.
Natiijo la’aanta ayaa timid kadib markii Madaxweynaha Somaliland uu dalbaday Ajandaha Shirka in lagu soo daro gooni Isu taaga Somaliland.
2da qodob oo uu miiska saaray madaxwe yne Biixi ayaa sababay in shirkii wajigiisii 1aad halka Shalay lagu joojiyo ayaa kala ah:
1. In garawshiyo laga bixiyo xasuuqii loo geystay shacabka Somaliland.
2. In lagu daro ajandaha in Somaliland aqoonsi la siiyo .
AKHRISO: War-murtiyeedka Ka soo baxay Shirkii Jabuuti ee Somaliland iyo Soomaaliya
Shirkii heerka sare ahaa ee wada-ta shiga 2da dal ee Somaliland iyo Soo maal iya ee ka qabsoomay dalka J/Djibouti 14 June 2020, kuna qabsoomay curintii Mada xweynaha J/Djibouti, Md.Ismaaciil Cumar Geelle, iyo hoggaamiyayaasha kale ee Go bolka ee kala ah:
Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya, Mudane Abiy Axmed, Madaxweynaha Soomaaliya Md.Maxamed C/Farmaajo, iyo Madaxwey naha Somaliland Md.Muuse Biixi Cabdi, si dib loogu bilaabo wada-hadalladii ku saa bsanaa xidhiidhka 2da dhinac ee Somali land iyo Soomaaliya, waxa ka soo baxay qodobadan:
· Hogaamiyayaashu waxay aqoonsade en kaalinta muhiimka ee J/Djibouti ka ga jir to nabadaynta Gobolka Geeska Afrika.
· Waxa la isla gartay in muddadii ka hor aysay shirkan taariikhiga ah ay dhac een dhawr wareeg oo wada-hadallo ah balse aan midho dhalin.
· Madaxweynaha Somaliland iyo Madax weynaha Soomaaliya waxay isla gart een in guddi farsamo oo ka kooban 2da wefti ay dib u bilaabaan wada-hadall adii labada dhinac, sidoo kale ay daba-galaan heshiisyadii iyo arrimihii hore loogu heshiiyey ee aan fulin.
· Waxa ay labada dhinac ku heshiiyeen inaan la siyaasadayn gar-gaarka dhi naca horumarka iyo maal-geshiga.
· Shirku waxa uu soo jeedinayaa in Dji bouti noqoto goobta Shirarka Farsa mo ka qabsoomayaan.
· Waxa la isla gartay in muhiimadda u saraysa ay leedahay danaha labada shacab ay ahaato xuddunta wada had allada labada dhinac.
· ? Shirku waxa uu ku boorinayaa dha mmaan ururada gobolka, qaaradda iyo caalamkaba in ay isugu geeyaan taageeradooda wada hadalladan.
War-murtiyeedkan waxa ku saxeexan Wasaaradda Arrimaha dibedda iyo Iskaa shiga Caalamiga ah ee J/Djibouti, 14 June 2020
Taliyihii booliska Atlanta ee dalka Maray kanka oo is casilay
Taliyihii booliska magaalada Atlanta ee dalka Maraykanka ayaa ku dhawaaqay inuu is casilay kadib, toogasho askartu u gaysa tay nin madow ahaa Jimcihii lasoo shaafay, isaga oo dibad bax ka qeyb qaadanaya.
Sargaalka is casilay oo la yiraahdo Erika Shields ayaa warqada iscasilaadiisa ku war eejiyay duqa magaalada Atlanta.
Ciidamada booliska ayaa Jimcihii toogtay Rayshardh Bruukis oo 27 sanno jir madow ahaa mar uu ka qeyb qaadanayay ba naanbaxyo rabshado watay. .